Apple dia nanambara ireo mpandresy tamin'ny fanambin'ny mpianatra haingam-pandeha | Vaovao IPhone
Apple dia nanambara ireo mpandresy tamin'ny fanambin'ny mpianatra haingam-pandeha
Apple dia iray herinandro monja miala amin'ny iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra amin'ny taona: ny WWDC 2021. Ity hetsika ity dia mampivondrona ireo mpamorona an'arivony tompon'andraikitra amin'ny famelomana ny App Store miaraka amin'ireo rindranasa izay mamonjy ny aintsika amin'ny asa maro mandritra ny andro. Apple dia naniry ny hanome valisoa ny zandriny indrindra amin'ny guild amin'ny alàlan'ny fanolorana azy ireo hanatrika ilay hetsika maimaimpoana. Saingy, amin'ny alàlan'ny hetsika virtoaly iray dia efa misy ny fahafahan'ny manatrika maimaimpoana. Na izany aza, ireo mpandresy amin'ny Swift Student Challange dia voafaritra izay manome valisoa an'ireo tanora mpamorona manodidina an'i Apple ireo.
Swift Student Challange: mpandresy 350 miaraka amin'ny mpikambana isan-taona maimaim-poana
Anisan'ity vondrona ity ny zatovovavy telo izay tsy vitan'ny fampiasana teknolojia hamahana ny olan'ny tena izy, fa mandray anjara mavitrika amin'ny fampianarana ny taranaka fara-mandimby hanao toy izany koa. Mandritra izany fotoana izany dia mirehareha amin'ny lalan'izy ireo izy ireo ary manome antoka fa ny hafa dia manana fitaovana hanarahana ny diany, alohan'ny hahavitany ny lisea.
El Swall Student Challange dia fifaninanana izay tanterahin'i Apple isan-taona alohan'ny WWDC. Ny tanjona dia ny mahita sy manome valisoa talenta manodidina ny kaody fampandrosoana manerana an'izao tontolo izao. Ireo mpandray anjara dia tokony mihoatra ny 16 taona ao amin'ny Vondrona Eropeana na mihoatra ny 13 any Etazonia. Raha te handray anjara dia tsy maintsy mandefa vaovao momba azy ireo izy ireo, mahafeno andiana fepetra takiana momba ny fiofanan'izy ireo amin'ny andrim-panjakana mifandraika amin'ny programa STEM na andrim-panjakana voamarin'i Apple. Ankoatry ny fanolorana tetikasa iray ao amin'ny Swift Playground izay azo andrana ao anatin'ny 3 minitra.
Toy izao no nanatsaran'i Apple ny sehatra fifanakalozan-kevitra ho an'ny WWDC 2021
Ora vitsy lasa izay ny fanambarana an-gazety dia navoaka nanambara ny fanapahan-kevitry ny mpitsara Swift Student Challange. Na izany aza, tsy misy lisitra ofisialy miaraka amin'ireo mpandresy 350 hatramin'ny firenena 35 samy hafa. Na eo aza izany dia te hanasongadina vehivavy telo i Apple izay tsy vitan'ny hoe nampiasa teknolojia hamahana olana amin'ny tontolo tena izy. Saingy mandray anjara mavitrika amin'ny fiarahamonina koa izy ireo. Nanamafy izany tamin'ny a valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety:
Mandritra izany fotoana izany dia mirehareha amin'ny lalan'izy ireo izy ireo ary manome antoka fa ny hafa dia manana fitaovana hanarahana ny diany, alohan'ny hahavitany ny lisea.
Hahazo ireo mpandresy Herintaona maimaim-poana fisoratana anarana amin'ny Apple Developer Program. Raha tsy eo amin'ny vanim-potoana ara-dalàna izy ireo, rehefa tonga amin'ny taonan'ny maro an'isa, dia ho afaka hifandray amin'ilay paoma lehibe hanavotana ny lokany. Inona koa, izy ireo dia handray palitao sy andiana pin iray Manokana an'ity WWDC 2021 ity manomboka amin'ny 7 Jona ho avy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia nanambara ireo mpandresy tamin'ny fanambin'ny mpianatra haingam-pandeha
Ny famolavolana vaovao an'ny tranokala Firefox dia tonga amin'ny iOS sy iPadOS